Kubhekiswa igama elingukhiye lokusesha kunombolo yamahhala
Ukulandelela ukuguqulwa kwe-SEO ngocingo
NgeSonto, ngoJulayi 11, i-2010 Lwesibili, Disemba 18, 2012 Douglas Karr
Siyajabula ukuba nekhasimende elisha kule nyanga elenza ukumaketha okubanzi emithonjeni yezindaba yendabuko. Ngomsakazo, ithelevishini kanye neposi eliqondile, indlela ejwayelekile yokulandela umkhankaso ngokunikela ngekhodi yekhuphoni noma ikhodi yesaphulelo ehlobene ngqo emuva nokunikezwayo.
Kodwa-ke, ngamabhizinisi anomnyango wezentengiselwano ongenayo, indlela eyinhloko esetshenzisiwe ukuthenga amabhange we izinombolo zocingo ezingabizi futhi usebenzise inombolo yocingo ehlukile emkhankasweni ngamunye. Ucwaningo lwamuva lukhombisile ukuthi amaphesenti aphezulu ezivakashi zewebhu azoshaya ucingo kunokuxhumana nenkampani ngefomu noma nge-imeyili (Ama-40% kusesho lwendawo).
Leli klayenti linobukhona obuhle bewebhu futhi sesivele sikhuphule ukuvakashelwa kwesayithi labo ngegama elilodwa elingukhiye ngo-15% kungakapheli izinsuku ezingama-30. Ukuhambela okwandayo kuhle, kepha kudingeka sikwazi ukukhomba ithrafikhi ekuguqulweni kwangempela. Iklayenti lethu kumele lazi ukuthi izindleko zokwenza izinjini zokucinga zengeza amadola ekugcineni. Isixazululo ukushada lezi zindlela ezimbili… ukwenziwa kwenjini yokusesha okuqondiswe kokuqondile izinombolo ezingakhokhelwa.
Tags: ukulandelela ikholiizingcingoizinombolo zocingo ezinamandlaukulandela ifoniukusebenzisa ngokugcwele injiniseo
Ngiyabonga Blogger! Isenzo Sezikhalazo se-DMCA
Yakha Ukwethembana Ngokuthi CHA!
Jul 12, 2010 ku-8: 11 AM
UDoug, ngiyazi inkampani enezinombolo zocingo eyodwa kuphela kodwa engeza okulula okuthi “Cela u-Amy” noma “Cela uJim” enombolweni yabo yamahhala ebhaliwe. Akekho u-Amy noma uJim enkampanini kepha uma bephendula bavele balalele ukuthi abantu babuza liphi igama bese bethi akekho lapha njengamanje kodwa ngingakusiza. Ngokusobala igama likhomba ukuthi imuphi umkhankaso abantu abaphendula kuwo.
Into efanayo isebenza ngezandiso ezingezona. Shayela ku-800-555-5555 x3542. Azikho izandiso ezingama-3542 kepha ikutshela konke odinga ukukwazi.
Jul 12, 2010 ku-10: 34 AM
Sasivame ukwenza okufanayo ngeDirect Mail, Patric! Sasivame ukusayina izinhlamvu ezinegama nesihloko mbumbulu - bese sikusebenzisa lokho ukulandela umkhankaso nokunikezwayo. Kulezi zinsuku zokubonisa okusobala okudingekayo, ngiyaqiniseka ukuthi umkhuba ojwayelekile ngeke uthokozelwe kakhulu manje.
Jul 14, 2010 ku-10: 33 AM
Okuthunyelwe okuhle uDoug. Kade sisebenzisa ukwahluka kwale ndlela: http://www.seoverflow.com/blog/call-tracking/roll-your-own-phone-call-tracking-program-it-is-easy/
okwesikhashana. Kuyisu elihle futhi kusiza ukufakazela inani lakho kumakhasimende kalula kakhulu. Kufanele ubheke lo mbhalo neTwilio kulabo abazisebenzisela lokhu ngokwabo.